Chimiro chePasi: zvese zvaunoda kuti uzive | Network Meteorology
Isu tinorarama pane yakaoma kwazvo uye izere nyika ine zvinhu zvisingaverengeke zvinoita kuti igare yakaenzana uye inobvumidza hupenyu. Chimiro chePasi Iyo yakakamurwa kuita zvikamu zviviri zvakanyanyisa. Kutanga iyo yepasi redu inoongororwa. Izvo zvakakosha kuti uzive zviri mukati mePasi kuti unzwisise zvakawanda zvekunze zvinhu. Mushure meizvozvo, zvakare zvinodikanwa kuti uongorore zvese zvekunze zvikamu kuitira, seyakazara, kuziva nyika yatinogara.
Mune ino post tichaongorora uye tizive zvakadzama mamiriro ese ePasi. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezvazvo?
1 Chimiro chemukati chePasi
2 Chimiro chekunze chePasi
2.1 Iyo hydrosphere
3 Chimiro chepasi chakafanana here kana chakasiyana?
Chimiro chemukati chePasi
Nyika inopa chimiro chakaumbwa neyakagadziriswa matanda uko zvese zvinhu zvinozvinyora zvinoshandura. Ichokwadi chekuti ivo vakaparadzaniswa nematanho isu tinogona kuziva nekuda kwekufamba kwemasaisai ekudengenyeka kwenyika pakaitika kudengenyeka kwenyika. Kana tikatarisa pasi kubva mukati nekunze, tinogona kucherekedza mativi anotevera.
Musimboti ndiyo nzvimbo yepakati-kati pePasi apo yakawanda simbi uye nickel zvinowanikwa. Iyo yakanyungudika zvishoma uye ndicho chikonzero chePasi rine simba remagineti. Inodaidzwa zvakare kunzi endosphere.
Izvo zvinhu zvakaumbwa nekuda kwekudziya kwakanyanya uko iko kunowanikwa. Zvimwe zvezvinoitika zvemukati mePasi zvinoratidzwa pamusoro. Tinogona kuona kudengenyeka kwenyika, kuputika kwemakomo kana kushanduka kwemakondinendi (plate tectonics).
Jasi rePasi riri pamusoro peiyo musimboti uye rinoumbwa kazhinji nesilicates. Iyo yakatetepa yakatetepa kupfuura yemukati mepasi uye isina kuunyana sezvainosvika pamusoro. Iyo inonziwo mesosphere.
Pakati penzvimbo iyi yakakura inoitika zvakawanda zviitiko zve convection yezvinhu. Aya mafambiro ndiwo anoita kuti makondinendi afambe. Izvo zvinopisa zvinhu zvinouya kubva mukati memusoro zvinokwira uye kana zvatonhora, zvinodzokera kumashure mukati. Aya ma convection currents mune jasi anokonzeresa iyo kufamba kwema tectonic mahwendefa.
Ndiro rekunze kwekunze kwemukati mePasi. Inodanwawo lithosphere. Iyo inoumbwa neyakareruka silicates, carbonates uye oxides. Iri gobvu munzvimbo munowanikwa makondinendi uye kuonda kune makungwa. Naizvozvo, rakakamurwa kuita gungwa regungwa uye kondinendi. Kukora kwega kwega kune huwandu hwayo uye hwakaumbwa nezvimwe zvinhu.
Iyo inzvimbo inoshandira geologically uko kwakawanda maitiro emukati anoratidzwa. Izvi zvinokonzerwa netembiricha iri mukati mePasi. Kune mamwe maitiro ekunze senge kukukurwa, kutakura uye kunyorova. Maitiro aya ari kukonzerwa nesimba rezuva uye nesimba regiravhiti.
Chimiro chekunze chePasi
Chikamu chekunze chePasi chakagadzirwawo nematanho akati wandei ayo anounganidza zvese zvepasi pano.
Iyo seti yenzvimbo yese yemvura inowanikwa muvhu repasi. Ese makungwa nemakungwa, nyanza nenzizi, pasi pevhu uye glaciers zvinogona kuwanikwa. Mvura iri muhydrosphere iri mukuenderera mberi kuchinjana. Haigare panzvimbo yakatarwa. Izvi zvinokonzerwa nekutenderera kwemvura.
Makungwa nemakungwa chete ndiwo anogara makota matatu epasi rese, saka kukosha kwawo padanho repuraneti kwakakura. Iko nekuda kweiyo hydrosphere iyo nyika ine hunhu hwayo hwebhuruu ruvara.
Huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakanyungudutswa zvinowanikwa mumitumbi yemvura uye zvinoiswa pasi pemasimba makuru. Iwo masimba anoita pavari ane hukama nekutenderera kwePasi, kukwezva kwemwedzi nemhepo. Nekuda kwavo, kufamba kwemasasa emvura senge mafungu egungwa, masaisai nemafungu anoitika. Aya mafambiro ane kukanganisa kukuru padanho repasirese, nekuti zvinokanganisa zvipenyu. Mamiriro ekunze akakanganiswawo nemafungu egungwa nemhedzisiro senge El Niño kana La Niña.
Kana zviri zvemvura nyowani kana kondinendi, tinogona kutaura kuti dzakakosha kwazvo mukushanda kwepasi. Izvi zvinodaro nekuti izvo zvinoumba zvakanyanya kugadzirisa mamiriro ezvinhu epasi.
Mamiriro ekunze Ndihwo hutara hwemagasi akakomberedza Nyika yese uye akakosha kuti hupenyu hugadzire. Oxygen ndiyo inogadzirisa gasi yehupenyu sekuiziva kwedu. Uye zvakare, magasi mazhinji anobatsira kusefa mwaranzi yezuva iyo inogona kuuraya zvisikwa zvipenyu uye zvisikwa.
Mhepo yakapamhamha yakakamuraniswa kuita zvidimbu zvakasiyana, imwe neimwe iine kureba kwakasiyana, mashandiro uye kuumbwa.
Kutanga na iyo troposphere, ndiyo imwe iri pachiso chakasimba chePasi. Zvakakosha nekuti ndiko kwatinogara uye ndiko kunopa mamiriro ezvemamiriro ekunze zvakaita semvura.
Iyo stratosphere ndiyo inotevera dura inotambanudzira pamusoro peanenge makiromita gumi eiyo troposphere. Muchikamu ichi ndiko kuchengetedzwa kwema UV UV. Iyo ozone layer.
Iyo mesosphere iyo inotevera yepamusoro uye zvakare iine imwe ozone.
Thermosphere inonzi iyi nekuti, nekuda kwemhedzisiro yezuva, tembiricha inogona kupfuura 1500 ° C. Imomo mune nzvimbo inonzi ionosphere, umo maatomu mazhinji anorasikirwa nemagetsi uye ari muchimiro cheiyoni, achiburitsa simba rinoita Mwenje wekuchamhembe.
Izvo zvipenyu haisi nhete yePasi pachayo, asi ndiyo seti yezvinhu zvese zvipenyu zviripo. Zvese zvipenyu zvinogara mupasi redu zvinoumba iyo biosphere. Naizvozvo, iyo biosphere chikamu cheguruva repasi, asi zvakare cheiyo hydrosphere nemuchadenga.
Hunhu hweiyo biosphere ndeye iyo inonzi biodiversity. Icho chiri pamusoro peakasiyana siyana ezvisikwa zvipenyu uye mafomu ehupenyu anowanikwa papasi. Uye zvakare, kune hukama hwehukama pakati pezvinhu zvese zveiyo biosphere inoitisa kuti zvese zvishande nemazvo.
Chimiro chepasi chakafanana here kana chakasiyana?
Kutenda nzira dzakasiyana dzekudzidza, zvinozivikanwa kuti iyo yepasi redu haina kufanana. Iyo yakarongedzwa munzvimbo dzakakomberedzwa dzine dzakasiyana zvivakwa. Maitiro ekudzidza ndeaya anotevera:
Nzira dzakananga: Iwo ndeaaya anosanganisira kucherechedza kudzidza mamiriro uye mamiriro ematombo ayo anoumba pamusoro penyika. Matombo ese anogona kubatwa akananga kubva pamusoro kuti akwanise kuziva zvese zvavo. Nekuda kweizvi, mumarabhoritari hunhu hwese hwematombo anoumba kukanda kwepasi kunofungidzirwa. Dambudziko nderekuti idzi dzidzo dzakananga dzinogona kungoitwa kusvika makiromita gumi nemashanu zvakadzika.
Nzira dzisiri dzakananga: ndeavo vanoshandira dudziro yedata kuti vaone zvakaita mukati mePasi. Kunyangwe isu tisingakwanise kuzviwana zvakananga, tinogona kuziva zvemukati nekuda kwekudzidza uye kuongororwa kwehumwe hunhu senge kuwanda, magineti, giravhiti uye masaisai ekudengenyeka kwenyika. Kunyangwe pamwe nekuongororwa kwemameteoriti mamiriro epasi epasi anogonawo kutorwa.
Pakati penzira huru dzisiri kunanga dziripo dzekugadzira chimiro chemukati chenyika masaisai ekudengenyeka kwenyika. Kudzidza kwekumhanyisa kwemasaisai nekufamba kwawo kwakatitendera kuti tizive zvemukati mePasi zvese mumuviri uye muchimiro. Uye ndizvozvo hunhu hwemasaisai aya hunoshanduka zvichienderana nehunhu uye nemamiriro ematombo vanopfuura. Kana paine nzvimbo yekuchinja pakati pezvinhu, inonzi discontinuity.
Kubva pane ruzivo rwese urwu, zvinotevera kuti mukati mePasi pane kusiyana uye yakarongedzwa munzvimbo dzakadzika dzine dzakasiyana nzvimbo.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve chimiro chePasi uye hunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Chimiro chePasi
zvine basa rei akadaro
peji racho rakanaka kwazvo
Marcelo Daniel Salcedo Guerra akadaro
Yakanyanya kunaka kune iyo peji ini ndakadzidza zvakawanda nezvenyaya iyi
Pindura Marcelo Daniel Salcedo Guerra
Jose Reyes akadaro
Rakanaka bhuku, rakazara kwazvo.
Pindura José Reyes